Iyo ine M, MX, MH, ST mhando .Yakagadzirwa neyakavhara-yakarongedzwa PET polyester firimu kutema kuita slim yarn uye kusveta nehusina hwakasiyana-siyana .such sa polyester kana rayon .Iyo inowanzoshandiswa mumakompiyuta embroidery uye craft accessories emhizha, fashoni, zvimwe embroidery.
MH meatllic tambo ine akapfuma yunifomu ruvara ine anopenya luster uye yakavimbika mhando. Yakanakisa yekushongedza tambo uye yekumonera rwonzi rwekusuka jira, yakarukwa jira uye sweta nedzimwe nguo.
M Type matellic yarn
M rudzi matellic yarn yakatemwa zvakananga kubva PET polyester firimu, inopenya, ine shinny ineruvara .Mainly inoshandiswa kuruka machira ekuchenesa chigadzirwa, yakarukwa mucheka uye zvakare iri yakasviba zvinhu
yekugadzira ST, MX uye MH mhando yesimbi yarn.
MX mhando matellic yarn
MX mhando matellic yarn inoitwa nekuturika 1ply ye M rudzi simbi yarn ine 2ply ye polyester kana nylon yarn .Inoshandiswa zvakanyanya mukugadzirwa kwezviratidzo ribbons, mhando, nezvimwe.
MH mhando matellic yarn
MH mhando matellic yarn inogadzirwa ne1ply yeM mhando simbi yarntwisted nemamwe mavara akasiyana-siyana, uye inoshandiswa zvakanyanya mukucheka, mucheka, jira, sweta, masokisi, zvigadzirwa zveKisimusi, nezvimwe.
ST mhando matellic yarn
ST mhando matellic yarn inogadzirwa negoridhe nesirivhi tambo yakavhenganiswa nemamwe mafirita. Iyo ine mavara akasiyana-siyana uye yakaisvonaka luster, inonyanya kushandiswa pakukwezva
MH nyora nylon kana polyester kana rayon metal metal
ST mhando yesimbi yesimbi
M Mhando 100% Metallic Yarn
MHS Nyaya 75% 150D Polyester 25% Mucheka wechipini
MX Type Metallic rwebhuruu